China Vertical Raidial Bidirection Extruder fantsom-pamokarana masinina sy mpamatsy | BAOTE
Rainbow Tech dia namolavola ny andiana milina fantsom-boaloboka vita amin'ny betira Bidirectional miaraka amin'ireo mpamokatra ao an-tsaina. Ny famolavolana singa mora ampiasaina amin'ny mpampiasa dia mamela ny fidirana mora amin'ny serivisy, ny fikojakojana mahazatra ary ny fanovana haingana ny fifamatorana. Mihena ny fotoana fanadiovana satria tsy dia misy ny fiparitahan'ny fitaovana. Ny akorandriaka vita amin'ny lavaka vy dia mampihena ny fotoana fametrahana azy ka lasa mivoaka haingana ny masinina.
Masinina fantsona RCC ambonimbony ampiasaina amin'ny famokarana fantsom-panafody sy famokarana fantsona simenitra maina.
Fitaovana milina fantsom-boaloboka vita amin'ny volo vita amin'ny simenitra dia afaka mamokatra fantsom-pako mivaingana vita amin'ny beton sy nohamafisiny
fantson-drano maloto vita amin'ny beton, fanaraha-maso mialoha ny laoniny, hano sns, izay be mpampiasa amin'ny tetik'asa fotodrafitrasa ambanin'ny tany
Manolotra ny orinasanay ny vokatra isan-karazany vita amin'ny fantsom-pandrosoana,
toy ny Flush Joint (Butt Joint), Rubber Ring Joint, interlocking joint, belled socket, in-wall joint, Pushing pipes, Jacking pipe sns raha misy ny fepetra takiana manokana, dia azontsika atao ihany koa ny mampifanaraka mety
milina fantsom-beton ho an'ny mpanjifanay.
Ny milina fantsom-pandehan'ny Radial Extruder RCC mitsangana dia manambatra ny haitao mandroso fantsona miaraka amin'ny rafitra fantsom-pirinty Bidirectional Roller loha efa za-draharaha mba hamokarana fantsona misy fatorana tariby vita amin'ny tariby, fanatsarana ny fihenan-danja ary fisehoana ambony. Izy io dia afaka manamboatra fantsom-pandrefesana amin'ny halavan'ny fanamiana miaraka amin'ny antsipiriany sy ny kalitao iraisana ao anatiny sy ivelany. Ny fanamafisana ny olana mihodina amin'ny tranom-borona dia nesorina, nitarika ny tanjaky ny vokatra avo kokoa.
Vertical Radial Press Concrete pipe fanaovana milina, Io no milina fantsom-pitiavana malaza indrindra amin'ny savaivony 300-1200mm, lava 1-3m.
Izy io dia avo kokoa noho ny automatique, ary manana fahaiza-manao lehibe, tsy misy mpandoto mandritra ny famokarana mora ampiasaina, ary vitsy ny mpiasa, mila fanasitranana voajanahary fotsiny, haingana mamono avy hatrany. raisin'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao izy io. Ny rafitra elektronika iray manontolo sy ny rafitra hydraulic dia samy mandray ny fanaraha-maso nomerika, manatsara ny fahombiazan'ny fikirakirana sy ny fitantanana ny masinina iray manontolo.
Ho lasa safidy tsara indrindra amin'ny fanaovana savaivony kely RCC fantsona 300-1200mm.
milina misy amin'ny maodely roa:
• milina ho an'ny savaivony 12 "- 48" (300 mm - 1200 mm) amin'ny halavany 8 'na 12' (2.5 m na 3.5 m)
• milina ho an'ny savaivony 12 "- 60" (300 mm - 1500 mm) amin'ny halavany 8 '(2.5 m) na 12' (3.5 m
Ny halavan'ny masinina hafa azo alaina amin'ny fangatahana
Ny counter-rotating, roller-head, ny fitaovana fampifangaroana dia mametaka ny beton ary fehezin'ny rafitra fifehezana teknolojia avo lenta.
Famokarana fantsona simenitra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena rehetra:
fantsona vita amin'ny vy nohamafisina vy
fantsom-boribory vy (PCCP) hatramin'ny 6 m ny halavany
savaivony nominal avy DN 225 mm ka hatramin'ny DN 1600 mm
ny halavany hatramin'ny 3500 mm
fotoana fiovana fohy dia manome antoka ny fampiasana milina optimum.
tsy misy fihodinan'ny tranom-borona
fampifanarahana fehezin'ny programa.
rafitra fanaraha-maso ny fizotran'ny rafitra.
lavaka masinina marivo.
safidy fanampiny: crane mandeha ho azy, rafitry ny gorodona mihetsika, fitsapana fantsona ary fikirakirana pallet fototra.
Ny motera elektrika mifehy matetika dia miaraka amin'ny famindrana fitaovam-pandehanana mandroso haingana ka miteraka hafainganam-pandeha marina sy tavy avo lenta ho an'ny valin'ny fametahana tsara indrindra. Mazava ho azy ny fitsitsiana angovo sy amin'ny haavon'ny tabataba kely indrindra
Ny habetsaky ny simenitra dia mikajiana mialoha, amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso voafaritra tsara ary omena isa sy taham-pahavitrana ho an'ny fizotrany. Ny valiny dia kalitao mivaingana avo lenta hatrany amin'ny socket mankany amin'ny spigot. Azo averina amin'ny laoniny amin'ny fotoana rehetra.
Ny fitaovana fampifanarahana no fototry ny fitifirana. Noho ny hetsiky ny fihodinana fihodinana, ny tranom-panamafisana dia tafiditra tanteraka amin'ny beton ary mihena ny fihodinan'ny tranom-borona. Mazava ho azy fa ny singa rehetra dia natao ho an'ny akanjo maharitra.
Bidirectional Roller head Drive System
Ny rafi-pitaterana rojika Bidirectional dia misy kapila fampandehanana hydrostatic roa mahaleo tena amin'ny fampandehanana ny rollerhead sy ny longbottom. Ny rafitra dia misy singa roa lehibe - singa iray mitondra lozisialy sy singa herinaratra miampita. Ny singa herinaratra miampita dia napetraka eo amin'ny sehatry ny masinina amin'ny haavon'ny conveyor mba hanomezana famindrana herinaratra mahomby amin'ny lohalaharana ary fidirana mora amin'ny serivisy sy fikojakojana.
Mihazona Hopper sy Conveyor
Ny fahaizan'ny hoppera mitazona dia miankina amin'ny haben'ny masinina, ary ny hopper dia manana zorony boribory hisorohana ny fananganana fitaovana. Misy liner azo isafidianana mba hanatsarana ny fikorianan'ny fitaovana, hanamorana ny fanadiovana ary hanitatra ny fiainana hopper. Ny mpampita entana dia entina amin'ny alàlan'ny vatan-tsolika miaraka amina fantsom-pamokarana, voaisy tombo-kase sy mihosotra amin'ny asa tsy misy fikolokoloana. Ny fivorian'ny conveyor dia miorina amin'ny roulers ary napetraky ny mpanara-maso ny milina ho an'ny famahanana fitaovana optimum amin'ny rollerhead. Ny fehikibo conveyor-seamless karazana miaraka amina sisin-dàlana dia manakana ny fihoaran'ny material.
Ny fihodinam-bokatra boribory dia misy horonan-tsary fanohanana mitete eo amin'ny vakim-paritra ary fivondronan'ny roller eo afovoany ho fanentanana sy fanampiana. Ny latabatra dia singa roa, arakaraka ny maodelin'ny masinina, ary misy ny tobim-pamokarana fantsom-bokatra misy sary nohetezana tsara ho an'ny takelaka afovoany ambany ho an'ny fanovana haingana ny fametahana. Maotera mandeha amin'ny herinaratra ny turntable. Misy takelaka misy takelaka manarona ny faritra eo anelanelan'ny latabatra sy ny gorodon'ny zavamaniry hanamorana ny fanadiovana.
Teo aloha: Kitapo Dumpster Skip
Manaraka: Sina ambongadiny China Canvas Mens Cross Body Bag Corpse Bags
Milina Pipe vita amin'ny beton
Masinina paompy vita amin'ny beton
Rcc Machine Pipe Concrete Pipe
Masinina Sodina Pipe
Bolts amin'ny kalesy, Masinina Sodina Pipe, U Bolts, Bolt firafitra, Hex Bolts, Lag Bolts,